ऋषि धमला र जितु नेपाल : नेपालमा रेल धेरै हुनेभयो, अब कसलाई दिने ? | रिपोर्टर्स नेपाल
ऋषि धमला र जितु नेपाल : नेपालमा रेल धेरै हुनेभयो, अब कसलाई दिने ?
ऋषि धमला : जनता जान्न चाहन्छन्, तपाई अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ?
जितु नेपाल : म पोखरामा छु ।
धमला : के गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपाल : छक्का पञ्जा ३ को सुटिङ गर्दैछु ।
धमला : सुटिङ कस्तो भइराछ ?
नेपाल : राम्रो भइराछ ।
धमला : उसो भए देशको राजनीति घटनाक्रमबारे थाहा छैन ?
नेपाल : छैन । अहिले के भइरहेको छ भन्ने नै थाहा छैन ।
धमला : नेताहरुसँग कुराकानी भएको छैन ?
नेपाल : छैन । कहाँबाट हुनु । त्यो त हजुरको काम पो त ।
धमला : नेताहरुलाई भन्नुपर्यो नि । देश विकास गर्नुपर्यो भनेर ।
नेपाल : काम गर्दिन, विकास गर्दिन भन्ने त नेतै छैनन् नि । सबैले गर्छु भनिराछन् ।
धमला : काम चाँही के गरे त खै नेताहरुले ?
नेपाल : धेरै काम गरेका छन् नि । भाउ बढाइदिएका छन् । रेल ल्याउँछु भनिराछन् । बाटो खन्छु भनिरहनुभएको छ । हाम्रो देशमा कामभन्दा बढि कुरा हुने हो । भैराछ ।
धमला : रेल आउने भयो त अब नेपालमा ।
नेपाल : हो । हेर्दा हेर्दै नेपालमा रेल धेरै भएर अरु देशलाई नै दिनुपर्ने होला जस्तो छ । मेरो कार्यक्रम तातोपिरो र झटारोमा पनि यो कुरा भनिसकेँ ।
धमला : के भन्नुभयो ?
नेपाल : नेपालमा रेल धेरै हुनेभयो, अब कसलाई दिने, छलफल गर्नुपर्छ ।
धमला : केपी ओलीको क्यारिकेचर गर्नुस् त ।
नेपाल : बिहान बिहानै के प्रधानमन्त्रीलाई जिस्क्याउनु ?
धमला : गर्नुस् न गर्नुस् ।
नेपाल : (ओलीको क्यारिकेचर गर्दै) यो ऋषिजीमा पनि बडो गजबको विशेषता रैछ । बडो चकित पाएको छु । हेर्नुस्, यो क्यारेकेचर भन्ने कुरा पनि बडो अचम्मको रैछ । पहिला पहिला मैले पनि गर्थेँ । म पनि फिलिमतिर खेलेको भए त बडो राम्रो हुनेरैछ ।
(क्यारिकेचर अन्त्य गर्दै) देश मुलुक समृद्धितिर गइसकेको छ । भन्न त जे भने पछि हुन्छ । ऋषि धमलाले बहस चलाउनुहुन्छ । जनता जान्न चाहन्छन् भन्नुहुन्छ । तर काम अगाडि बढिसकेको छ । केपी ओलीको चीन भ्रमणपछि नेपालमा रेल कहिले आउने भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।
धमला : देश संघीयतामा गएपछि विकास होला त ?
नेपाल : अहिले त भद्रगोल नै छ । के हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन । रेल लिगमा हिँड्नुपर्छ । जतापायो त्यतै दौडेर हुँदैन । त्यस्तै संघीयतालाई पनि सही ट्रयाकमा हिँडाउनुपर्छ ।
धमला : सबैको ध्यान विश्वकप फुटबलतिर छ । तपाई पनि फुटबलको पारखी हो क्यारे ।
नेपाल : हो । तर विश्वकपका बेला हामी घरपरिवारलाई ध्यान दिदैनौँ । आफ्ना काममा लाग्दैनौँ । अरुले खेलेको, नेपालीले खेल्ने पनि होइन । चाहिने भन्दा बढि ध्यान दिएका छौँ । हेर्नै हुँदैन भन्ने त होइन । तर जर्सी लगाएर झगडा गर्ने, बाजी राख्ने, जस्ता नचाहिदा बकम्फुसे फाई फुईँ गर्नुहुँदैन । एउटा टिम मन पर्यो भने अरुलाई चाँही गाली गर्नुहुँदैन ।
धमला : अब प्रचण्डको क्यारिकेचर गर्नुस् । उहाँले देश विकास गर्छु भन्नुभएको छ ।
नेपाल : प्रचण्डले कसरी देश विकास गर्ने ? उहाँ प्रधानमन्त्री होइन । उहाँलाई त पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ता मिलाउँदैमा फुर्सद छैन । यता हेरे पनि कमरेड, उता हेरे पनि कमरेड । विकास गर्ने भनेर फ्याट्ट बाटो पिच गर्छु भनेर हुँदैन । बजेट मिलाउनुपर्यो । ठेकदारले गर्दिदैन । ३३ किलो सुन कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन । मान्छे समातेको समात्यै छ । यस्तो देशमा कसले के गरने भनेर क्यारिकेचर गर्नु र ? अब त क्यारिकेचर नै छोडौँ जस्तो लागिसक्यो ।
धमला : सुन तस्करहरुको संजाल त तोड्नुपर्यो नि जितु नेपालजि ?
नेपाल : हामीले कसरी तोड्नु ? हामीले लिएको छैन । ६ महिना कार्यक्रम गरेर पनि श्रीमतीलाई एक तोला सुन किन्न सकेको छैन । सक्नेले लाउने रैछ ।
(नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
इँट्टा उद्योगसम्बन्धी रणनीतिक योजना
किसानलाई कृषि प्रविधिको सूचना दिने मोबाइल
काँग्रेसले छिटै उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने
फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि नवोदित कलेजलाई
मनमोहन सिंहको नाममा फिल्म बन्दै
विषादी सेवनबाट महिलाको मृत्यु
बिहे भएकोे १ बर्ष पछि नायिका पन्त नेपालमा